Ei The Phyu's Likes - Myanmar Network
Ei The Phyu's Likes
Back to Ei The Phyu's Page
စာသင်ခန်းထဲကအင်္ဂလိပ်စာအလွဲများ “ဆရာရေ စာနည်းနည်း မေးချင်လို့ပါ” “သြော်….အေးမေးလေ” “ဟိုတစ်နေ့က ရွှေတိဂုံဘုရားစောင်းတန်းမှာရှိတဲ့ ပန်းချီကားတွေကြည့်နေတုန်း နိုင်ငံခြားသားတစ်ယောက်က လာမေးတယ်ဆရာ”“ဟေ ဘာမေးတာလဲဟ ကြည့်ရတာ မင်းကို ဧည့်လမ်းည… Discussion စာသင်ခန်းထဲကအင်္ဂလိပ်စာအလွဲများ 68 Likes ကျော်ကြားသော ရှိတ်စပီးယားပြဇာတ်ပါ စကားလုံးစု… အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားလေ့လာသူများအတွက် ရှိတ်စပီးယားပြဇာတ်ဆိုသည်မှာ ခက်ခဲလွန်းလှသည် ဟုမြင်နိုင်ပါသည်။ သို့သော်လည်း အမှန်စင်စစ် ထိုသို့မဟုတ်ပါ။ ရှိတ်စပီးယားဟူသည် ဖတ်ရန်ခက်ခဲသော ပြဇာတ်များဟု ကျွန်ုပ်မထင်မြင်ပါ… Discussion ကျော်ကြားသော ရှိတ်စပီးယားပြဇာတ်ပါ စကားလုံးစု… 12 Likes Copywriter စာလုံးပေါင်းမှားတဲ့အခါ ငယ်ငယ်တုန်းက ဝါကျဖွဲ့ပါဆိုတဲ့ မေးခွန်းက အမှတ်အလကား ပေးထားသလို လွယ်ကူလွန်းပါတယ်။ အရွယ်ရောက်လို့ အလုပ်ခွင်မှာ၊ တကယ့်ဘဝမှာ ဝါကျတွေ ဖွဲ့ရတဲ့အခါကျ လူတိုင်း အမှတ်မရတတ်တော့ပါဘူး။ အမှတ်လျှော့မယ့် အမှတ်ပေးစည… Discussion Copywriter စာလုံးပေါင်းမှားတဲ့အခါ 15 Likes ကျွန်တော်တို့သည် မောင်လှများ မဟုတ်ပါ ကျွန်တော်၏အမည်သည် မောင်လှမဟုတ်ပါ။ ကျွန်တော်၏ ဖခင်မှာ ဦးဘ မဟုတ်ပါ။ ကျွန်တော်သည် ရွာသာယာမှ မဟုတ်ပါ။ နောက်ပြီး ကျွန်တော်၏ ရည်မှန်းချက်မှာ ဆရာဝန်ဖြစ်ရန် မဟုတ်ပါ။ မူလတန်းတွင် “ကျွန်တော်၏အကြောင်း” စာစီစာက… Discussion ကျွန်တော်တို့သည် မောင်လှများ မဟုတ်ပါ 44 Likes သတိမထားမိလိုက်တဲ့ အင်္ဂလိပ်စကားရဲ့ ညင်သာတဲ့ အေ… &lt;Zawgyi&gt; ဘာသာစကားတွေဟာ အချိန်နဲ့အညီပြောင်းလဲတတ်တယ်ဆိုတာ လူတိုင်းသိပါတယ်။ အခုဆိုရင် မကြာသေးခင်ကမှ အသစ်ပေါ်လာခဲ့တဲ့ စကားလုံးတွေ (ဥပမာ - bromance, YOLO, derp)၊ ဒါမှမဟုတ် ခေတ်ကုန်သွားခဲ့တဲ့စကားတွေ (… Discussion သတိမထားမိလိုက်တဲ့ အင်္ဂလိပ်စကားရဲ့ ညင်သာတဲ့ အေ… 18 Likes မသိသာသောခြားနားချက်များ - Road နှင့် Street,… "Road" နှင့် "Street" ကြား ဘာခြားနားပါသလဲ "Road" ဆိုတာကတော့ ပုံမှန်အားဖြင့် ပို၍ ဝေးကွာတဲ့နေရာ နှစ်နေရာကြားရှိ လမ်းကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ Street ကတော့ မြို့ကြီး (City)၊ မြို့(town) သို့မဟုတ် ရွာထဲမှာ ခင်… Discussion မသိသာသောခြားနားချက်များ - Road နှင့် Street,… 30 Likes
Phonetic အသံထွက် ဖတ်နည်းလမ်းညွှန် Pronunciation Symbols (အသံထွက်သင်္ကေတများ) အသံထွက်သင်္ကေတများကို 1. Vowel sounds a) Short Vowels b) Long Vowels 2. Diphthongs 3. Consonant sounds ဟူ၍ အောက်ပါအတိုင်း အဆင့်အဆင့်ခွဲထားပါသည်။ (1)… Discussion Phonetic အသံထွက် ဖတ်နည်းလမ်းညွှန် 31 Likes
ကွန်ပျူတာနည်းပညာ လေ့လာလိုသူများအတွက် E-Book… ကွန်ပျူတာနည်းပညာ လေ့လာလိုသူများအတွက် E-Book စာအုပ်တွေရှိတဲ့နေရာ(မြန်မာလို)။ ကွန်ပျူတာနည်းပညာရပ်များကို စတင်လေ့လာနေတဲ့သူတွေအတွက် မြန်မာလိုရေးသားထားတဲ့ E-Book စာအုပ်တွေရှိတဲ့ နေရာကိုကျွန်တော်သိသလောက်ေ… Discussion ကွန်ပျူတာနည်းပညာ လေ့လာလိုသူများအတွက် E-Book…7Likes သင့်အတွက် အလိုအပ်ဆုံးအရာက ဘာလဲ လူသားတွေရဲ့ အခြေခံလိုအပ်ချက်ကြီးတွေထဲမှာအရေးကြီးဆုံးက ၀င်ငွေ (Income) ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ အရေးကြီးဆုံး ၀င်ငွေကို ရှာဖွေကြရာမှာ နည်းလမ်းနှစ်သွယ်ရှိပါတယ်။ ၀င်ငွေလုံးဝမရှိသေးသူများဟာ အလုပ်အကိုင် (Job) တစ်… Discussion သင့်အတွက် အလိုအပ်ဆုံးအရာက ဘာလဲ 23 Likes
လမ်းမပေါ်က ငါးပြားစေ့ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းသည် ကျွန်မ၏စိတ်ကြိုက် ၀ါသနာအရလုပ်သည့်အလေ့အထ တစ်ခုတော့ မဟုတ်ပါ။ သို့သော် ကျွန်မအတွက်အကျိုးရှိသည်ကိုတော့ သိပါသည်။ ဒါကြောင့် နေ့စဉ် အပြင်ထွက်ပြီး ၂ မိုင်ခန့်လမ်းလျောက်ဖြစ်ရန် ကျွန်မ… Discussion လမ်းမပေါ်က ငါးပြားစေ့ 31 Likes
English Lessons from British Council and BBC // // // // // // // // // Page English Lessons from British Council and BBC 172 Likes
၁၀ တန်းအောင်ရင် ဘာလုပ်ကြမလဲ အပိုင်း ၂ ပညာရေးအတွက် မိဘတွေက ဘယ်လောက်အတိုင်းအတာထိ ပံ့ပိုးဆောင်ရွက်နိုင်မလဲဆိုတဲ့ အချက်ကလည်း အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုအနေနဲ့ ပါဝင်လို့ နေပြန်ပါသေးတယ်။ ဒါကြောင့် မေးမြန်းလာတဲ့အခါ ကလေးက ဘာဝါသနာပါသလဲ၊ ဘာလုပ်ဖို့ ရည်ရွယ်ထားသလဲ… Discussion ၁၀ တန်းအောင်ရင် ဘာလုပ်ကြမလဲ အပိုင်း ၂ 26 Likes